JINGHPAW KASA: ဗမာအစိုးရစစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရ ပြည်သူများ
ဗမာအစိုးရစစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရ ပြည်သူများ
Ndai zawn re myen matse labye ni hpe K.K gaw dai hku gaw n kabai da ai gaw myit shaja da ga yaw Wunpawng sha ni e
bumchyang bum said...
ndai zawn n tara ai, n shawp ai mu hpe galaw ai ni hpe gaw KKajeyang dawdan ai ari ya jang nan hkrum sha mu ga ngu nna sha kyuhpyi ai law,,,,
ဗမာစိတ်မရှိတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကိုဗမာလိုဆုးံမမှရတော့မယ်။ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးဟာဘုရားမရှိတရားမရှိတဲ့အထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လုပ်ရပ်ဆိုတာကိုဘုရားရှိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနားလည်တယ်။ဒါပေမယ့်အခုဖြစ်ပျက်တဲ့လုပ်ရပ်ဟာဘုရားရဲ့ဆုးံမစကားကိုမကြာဖူး တဲ့ တိရစ္ဆာန်နှင့်မထူးခြားလှသည့်အကောင် တွေရဲ့လုပ်ရပ်ဆိုတာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုးံ၌ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့သိပ္ပံဆရာတောင် ပင်ပင်ပန်းပန်းသူ့ရဲ့ စမ်းသပ်ခန်းတွေ လေ့လာဆန်းစစ်စရာမလိုဘဲအဖြေက အစစ်အမှန်ထွက်ရှိသိနိုင်တယ်။
This is what Aung San Suu Kyi doesn't care about, and is happy to ignore: The work of her friends in the Sit-tut.
According to the United States, its human rights dialogue with the SPDC is "very positive."
လူစိတ်မရှိတဲ့ ဗမာစစ်အစိုးရတွေ၊ လူမျိုးရေး နဲ့လား၊ ဘာသာရေးနဲ့ လား ပြောစမ်းပါ။ လူမျိုး ၆ မျိုးလုံး ပေါင်းမိလို့ကတော့ မင်းတို့ ဗမာစစ်အစိုးရတွေ အမျိုးတုန်းသွားမယ်။ မင်းတို့ကောင်တွေ ငါ့ချီးစားကြစမ်းပါ။
ခွေး ဗမာ့တပ်မတော်တွေ။ ငါ့မှာ အနုမြူ ဗုံးသာရှိကြည့် မင်းတို့ကောင်တွေ
မြန်မာနိူင်ငံဟာ မင်းမဲ့နေပြီနဲ့တူနေတူနေပါပြီ ယခုလိုရက်စက် ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာတော်လောက်ပါပြီ ရှိတဲ့ဦးသိန်းစိန်ကလည်း တိုင်းရင်းသားဒေသတွင် စစ်ပွဲများအပေါ် မိမိတို့ဘက်ကထိုးစစ်တွေမလုပ်ပါဘူးလို့လည်း သတင်းမှာဖော်ပြနေတာဟာ ဂုဏ်သိပ်ခါနှင့်မဆီလျော်အောင်လိမ်လည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ် သြဇာသိပ်ကမ သိန်းစိန်ကလည်း နေပြည်တော်တွင် တိုင်းရင်းသားဒေသရှိ စစ်များရပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တော်လည်း နေပြည်တော်ကောင်းကင်ယံတွင်သာ အငွေ့အဖြစ်ပျောက်ကွယ်သွားသလားတော့မသိဘူးဗျာ ကျနော်တို့ ကချင်မှာတော့်ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နိူင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဦးသိန်းစိန်ကိုမှ ငြိမ်းချမ်းရေလိုလားခြင်းမရှိခြင်းပါဘဲ စစ်အာဏာရှင်ကနေ လူဝတ်လဲပြီဖြစ်သော်လည်း အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတုန်းပါဘဲတူနေတယ်ဗျာ ဆွေးနွေးနေတဲ့ကြားက လက်အောက်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ် ဦးသိန်းစိန်ရဲ့သြဇာကပါးစပ်ဖျားမှာဘဲပျောက်ကွယ်တာလားဒါ့ကြောင့်မြန်မာနိူင်ငံမှာအုပ်ချုပ်မူတွေဘယ်နှမျိုးရှိတာလည်းတော့်မသိတော့ဘူး ဦးသိန်းစိန်က ဒါက (ခ)ခခွေးနော်လို့ ပြလိုက်တာ အောက်ခြေတွင် မရောက်သေးဘူး(ေ)တဝေထိုးဖြစ်သွားတာတော့ဦးသိန်းစိန်ရဲ့သြဇာမညှောင်းသေးတာဘဲဒါ့ကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေယုံကြည်ရခက်နေတာဘဲ
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာရှိတော့မလားမသိဘူး စစ်အစိုးရစစ်တပ်မတော် လူသတ်သ မားသည်က ငြိမ်ချမ်းရေးမလိုချင်လို့ အခုလိုမျိုး လုပ်ရပ်ကို လုပ်တာဘဲ ကျွန်တော် တို့ အနာဂတ်တွက် ဘယ်လိုယုံရမလဲ လုံးဝမယုံတော့ဘူး ယခုဖြစ်ရပ်ကို တစ် ကမ္ဘာလုံး ကြော်ငြာလိုက်တာ အကောင်းဆုံးဘဲ လို့ အားလုံးကို ပြောလိုက်ချင် တယ်
UWSA. zawn re ni a-Myit zasat rai yang gaw, Hpakant Byu-ha-Kung dai gaw a-tsawm a-yai ai na sai..., KIA.ni hpabaw a-matu yu chyai nga ma ai kun gaw n-chye ai....,
Sumla n-dai ni hpe...,UN,USA.EU. ni hpang de a-tsawm sa dat mu..., Myen a-masu magaw matsat sha bat hpe Mungkan ting chye ra ai....,
n dai lam ni gaw anhte myusha ni mungdan lau lu na matu madi shataw ai lakang n,gam ni tai wa na matu K K lajang ai san san rai u ga.mungdan sha gu hta nga nga ai myusha u,hpun u,hpawng ni yawng hteen,dai lam hpe mung dan kaba ni hte UN,EU niyawng yawng lau lau chye hkra sha kut ya myit yaw.
Jinghpaw Wunpawng Myusha yawng hte e....,sharin la mu..,sharin la mu..., a-sai hkaw n-na..,a-sak sum n-na sharin la ai lam re...,Jawmg n-lung ai rai yang..., LASHAWNG.., sha chye gang sai ni yawng gaw..,SINAT hta hpai n-na..,Myen Hpyen hpe langai myi lusat lusat. gap mu ngu ai gaw.., dai re..., Teng man ai SIMSA lam ngu ai Mung galoi mung n-mai byin ai yaw...,yu n-na mung..,Madat yu n-na mung..,Sawn yu n-na mung hpa chyi la mu...,lai lia gaw hkum si hkam mu....,
dai hku re taw ia ya kaw na sha n re ai moi kaw na she re sai hpa majaw ma na sha taw ia ta ya hka la si hkrum ai ni hpe yu jang sha brang wa ngan ni chyu re ngu mu ma da ai hpa majaw ta nang hte hpe wa htang ma gawp ma ga ra na kun nu num ma ka ji ni hpe m ahtang m agawp ma ga ra na kun myit yu ga ngam nga ai wp myu sha niengai gaw ga dai hpe ma ma ra n kam sh agun ai chye ning len hkam ma na sha taw ai ni hpe she n gun n lu dik ai
kia ကပစ်လို့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ သေတာတွေကိုကော ဘယ်လို ပြောကြမလဲ..အကောင်းဆုံးကတော့ မြန်မြန်ငြိမ်းချမ်းရေးရမှ အားလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်မယ် ဆိုတာပါပဲ..
Myenmung kata kaw shamu shamawt nga ai wuhpung ni ndai sumla hpe Awng San kaw hpe shagun ya mu shi kawa di ni ndai zawn masha nre shing gyim ahkaw ahkang tawt lai ai ladat ni hpe shi gara hku mahtai jaw na kun san dat mu
Myu Wunpawng sha niemyen ni gaw Anhte Wunpawng sha ni hpe myu shamyit matsing hte sat nga sai ngu ai gaw adan aleng mu nga sa ga ai. N-gun naw ja ai la ni hte ramma ni yawng lu ai laknat hpe bai gasat sa ga. hkum ung ang nga manu. Wunpawng mungdan hpe gap di la sa ga. Mung hpawng ngu mung tsun jin sai, lagin sai, galoi mung munghpawng mungdan mung byin wa na n re. Myen ngu hpe labau kaw yu yang galoi myit matu n ding ai ni re, grai myit magaw ai, grai masu magaw chye ai ni re majaw anhte zawn kam loi, madat mara chye ai ni hte gaw gara hku mung rau n mai nga ai. San san nga mat sa ga. Zingri zingrat ai ladu lai sai, Wunpawng myu sha ni hkum hkam mana nga manu. Yang myit hkrum mang rum let rawt ga. K.Katsam jaw na re.
Burmese soilders have to go to hell.
K.I.A ပစ်လို.သေတဲ.ပြည်သူဆိုတာ မင်းအမနှင်.မင်းအမေ ဘဲဖြစ်လိမ်.မယ်၊ ဗလကြီးဆိုတဲ. လဒ ရဲ.။
ရွေဝါရောင် တဝင်းဝင်းနဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကာတဲ့ နိုင်ငံကြီးတဲ့ ဟီးဟီး
ရဟန်းဃာ တွေဆီတရားနာတယ် ပြီးရင်သတ်ရော ဒါတောင်ရဟန်းသံ
ဃာတွေနော် ဒီလူတွေသေတာများ သူတို့ ကနှာတောင်မစေးဘူးဗျာ့
အောင်ဆန်းစုကြည် ခဏ ခဏ ပြောပါတယ် ဒီမိုကရေစီလို့သုံးနှုန်းလို့ 
မရသေးပါဘူးတဲ့ တာထွက်ဖို့ခရားမှုတ်လိုက်တာပဲရှိသေးတယ်လေ
အရင်ကdirect အကြမ်းနည်းလေ အခုကindirect ပေါ့
သူတို့ လိမ်တာကအခုမှမဟုတ်တာ အမြဲတမ်းကိုလိမ်နေတာလေ
အာဏာရဲ့ ရိုးရာတခုအပါအဝင်ပေါ့ တခုရှိသေးတယ်အမြဲတမ်းကျင်းပတဲ့
စစ်အာဏာရှင်ပွဲရှိသေးတယ် အဲ့တာက လူသတ်(တပ်)ပွဲတဲ့ ဒါလည်း
The Burmes soilders who murdered the innocent civilian,May The God punish to the whole of your family,
Show that သန်းရွေ = သိန်းစိန် ?
သန်း=ငွေ (ပိုက်ဆံ) ၏သတ်မှတ် တန်ဖိုး
သိန်း=ငွေ (ပိုက်ဆံ) ၏ သတ်မှတ် တန်ဖိုး
စိန်=ရတနာ စည်းစိမ်တခု၏ အမည်နာမ
From above equatios,
R.H.S= သန်း=သိန်း and
R.H.S=ရွေ = စိန်
into both sides,
သန်းရွေ = သိန်းစိန်
သူပုန်ပြောသမျှကို မယုံကြပါနဲ့ ။ အစိုးရဆိုတာက တရားဥပဒေနဲ့ အညီ တရားသော စစ်ကိုသာ အလင်းထဲကနေ ဆင်နွဲနေတာပါ ။ သူပုန်ဆိုတာက အမှောင်ထဲနေ မိုင်းထောင် အကြမ်းဖက်နဲ့ မတရားမူတွေကို လုပ်နေတာပါ ။ အစိုးရက နိုင်ငံတော် ဆူပူမူ့ မဖြစ်အောင် လုပ်တာကိုသာ ပြည်သူတွေ အပြစ်မြင်နေကြတယ် ။ တကယ်တမ်း သူပုန်တွေ မှောင်ခိုလုပ်တယ် မိုင်းထောင် ရထားလမ်းဖျက် ။ ကချင်ပြည်သူတွေ ဝမ်းစား ရှာဖို့ ခက်ခဲအောင်လုပ် ။ ဒီလိုလုပ်နေတာကိုရော မမြင်ကြတော့ဘူးလား။ သူပုန်တွေကြောင့် ပြည်သူတွေ သေကြေတာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အခုဟာက ပြည်သူနဲ့ အစိုးရကို ရန်တိုက်ပြီးတော့ တောမီးလောင်ရင် တောကြောင် လက်ခမောင်းခက်မဲ့ အနေအထားပါ ။